‘नयाँ राष्ट्रपति छान्नुपर्ने पक्षमा एमाले र एमाओवादी'’ - BBC News नेपाली
‘नयाँ राष्ट्रपति छान्नुपर्ने पक्षमा एमाले र एमाओवादी'’
Image caption नेपाली कांग्रेसले नयाँ राष्ट्रपतिको विवाद छोडेर संविधान निर्माणमा लाग्न सहयात्री दलहरुलाई आग्रह गरेको छ
नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नु पर्ने विषयमा साझा धारणा बनाएको एमालेका एकजना नेताले बताएका छन्।
त्यस्तो प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसका नेताले भने अहिले राष्ट्रपतिको लागि नयां चुनाव गरिने सम्भावना नरहेको र नयाँ बन्ने संविधानमा व्यवस्था गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेलले एमाले र एकीकृत माओवादीको आइतबार बसेको बैठकले नयाँ राष्ट्रपतिको चयन गर्नुपर्ने पक्षमा साझा धारणा बनाएको बताए।
धारा ३६ को ‘ख’ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाले गर्छ भनिएको छ। अनि ६४ सालको संविधानसभाले निर्वाचन गरेको राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधासभाका सदस्यहरुले चिन्नु पर्दैन ? एमाले र एमाओवादी एउटै ठाउँमा उभिने स्थिति छ यो विषयमा।
अग्नी खरेल, नेता, नेकपा एमाले
अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले भने, “संविधानसभाको कामभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने पनि एउटा महत्वपुर्ण काम हो। त्यो कुरा अहिले पनि संविधानमा लेखिएको छ। धारा ३६ को ‘ख’ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन संविधानसभाले गर्छ भनिएको छ।”
“अनि ६४ सालको संविधानसभाले निर्वाचन गरेको राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधासभाका सदस्यहरुले चिन्नु पर्दैन? एमाले र एमाओवादी एउटै ठाउँमा उभिने स्थिति छ यो विषयमा।”
तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विपक्षमा नेपाली कांग्रेस उभिदै आएको छ। उसले सत्ताको मोलमोलाईको लागि यस्तो विवाद झिकिएको आरोप लगाउने गरेको छ।
नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था हामी गर्छौं। त्यही व्यवस्था अनुसार निर्वाचन हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडी नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने सम्भावना न्युन छ।
नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता पूर्णबहादुर खाड्काले नयाँ संविधान नबनी राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न नहुने बताए।
उनले भने, “एक वर्षभित्रमा संविधान बनाउने र नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था हामी गर्छौं।
"त्यही व्यवस्था अनुसार निर्वाचन हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडी नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने सम्भावना न्युन छ।”
राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विवादले पुन दलहरुलाई सहमतिको राजनीतिबाट टाढा लैजाने हो कि भन्नेमा कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।